मानबहादुर श्रेष्ठको राष्ट्रिय भलिबल टोलीमा पुनरागमन, छनोटमा को को परे ? - sailungonline
मानबहादुर श्रेष्ठको राष्ट्रिय भलिबल टोलीमा पुनरागमन, छनोटमा को को परे ?
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार १५:५० । काठमाडौँ
Photo : NVA FB
ओपन स्पाइकर मानबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय भलिबल टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् । नेपाल भलिबल सङ्घ (एनभीए) ले शुक्रबार बङ्गलादेशको ढाकामा हुने ‘एसियन सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता’को लागि राष्ट्रिय पुरुष टोलीको पहिलो चरणमा २० खेलाडी छनोट गर्दा मानबहादुरले पुनरागमन गरेका हुन् ।
मानबहादुरसँगै दिलबहादुर सुनुवार र भैरव बमले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् । पुरुष टोलीका डच प्रशिक्षक हान एबिङले झमनसिंह दर्जी र धिरज बस्नेतलाई पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा स्थान दिएका छन् ।
यसअघि मानबहादुर नेपालमै आयोजना भएको एभीसी सेन्ट्रल जोनबाट टोली बाहिर थिए । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता नभएको भन्दै एनभीएले मानबहादुरलाई कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि मानबहादुर टोली बाहिर रहँदै आएका थिए ।
यद्यपि, मानबहादुरले नेपालमा आयोजना भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा भलिबल टोलीमा नभए पनि ‘बिच भलिबल’ खेलेका थिए । बिच भलिबलमा मानबहादुर र दिलबहादुर सुनुवारको जोडी थियो ।
शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा भएको छनोटमा एभीए क्लब च्याम्पियनसिप खेलेका ३३ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसबाट उत्कृष्ट २० खेलाडी छनोट भएका हुन् ।
छनोट खेलाडीमा नेपाल आर्मीको बाहुल्यता छ । आर्मीका १० खेलाडी रहँदा नेपाल पुलिसका ६ खेलाडीले स्थान बनाएका छन् । यता, एपीएफका तीन खेलाडीले स्थान बनाउँदा विभाग बाहिर (बुढानीलकण्ठ) बाट एक मात्र खेलाडी छन् ।
एभीसी सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिता २१ देखि २९ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
छनोट भएका २० खेलाडी
इम रानामगर, हरि थापा, दुर्गा महतो, मानबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर भट्ट क्षेत्री, धिरज बस्नेत, राजेन्द्र विष्ट, टेकराज अवस्थी, विजय थापा, दिलबहादुर सुनुवार, हरि अधिकारी, दुर्गाबहादुर खड्का, भैरव बम, दीपकराज जोशी, विशाल विक, शरण सामरी क्षेत्री, रविन चन्द, झमनसिंह दर्जी, विनोद चन्द, ईश्वर थापा
नेपाल आर्मी – दुर्गा महतो, मानबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर भट्ट क्षेत्री, राजेन्द्र विष्ट, दिलबहादुर सुनुवार, हरि अधिकारी, दुर्गाबहादुर खड्का, भैरव बम, शरण सामरी क्षेत्री, ईश्वर थापा
नेपाल पुलिस – इम रानामगर, हरि थापा, दीपकराज जोशी, विशाल विक, रविन चन्द, झमन सिंह दर्जी,
एपीएफ क्लब – टेकराज अवस्थी, विजय थापा, विनोद चन्द
बुढानीलकण्ठ भलिबल क्लब – धिरज बस्नेत